Gay News - I-eGay Shop
Ukuza kube yimali Iindaba, amazwana kunye neengcamango ezivela kwihlabathi le-gay zifakwe kwizandla zakho. Yabelana kwaye udibanise uluntu.
I-Afrika ayiyona indawo yokubamkela ububele emhlabeni jikelele ukuba ibe yindoda evulekileyo. Utshutshiso luqhelekile kwaye luquka "ukuhlolwa kwezokwelapha." Ekuphumeleleni kwintlalo ye-LGBTQ, inkundla yaseKenya inqume ukuba ukuhlolwa koomntu onyanzeliswayo akuvumelekanga. Abagwebi bathi "ukuxhomekeka kwabafaki-zicelo kwiimviwo zangaphambili ziphule amalungelo aBathengi phantsi kwee-25, 27, 28 kunye ne-29 yomgaqo-siseko" kunye "nokusetyenziswa kobubungqina obufunyenwe ngokuhlolwa kwabafundi beekhalazo kwiinkqubo zobugebengu ezichasene nazo ziphula amalungelo abo phantsi Inqaku le-50 yomgaqo-siseko. "" Isigwebo siyinyathelo elincinci nje kuphela ekuphakamiseni isidima sabalingqingili abaye baxhomekeka kwiingxaki zokuhlolwa kweemviwo kodwa kunye nokulawula ...